Muxuu Yahay Mashruuca lagu Wareejiyay Mamulka G/Banaadir? -
HomeWararkaMuxuu Yahay Mashruuca lagu Wareejiyay Mamulka G/Banaadir?
Muxuu Yahay Mashruuca lagu Wareejiyay Mamulka G/Banaadir?
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) iyo Wasiirka shaqada iyo arrimaha Bulshada Xildhibaan Sadiiq Warfaa ayaa maanta Muqdisho ku kala saxiixday mashruuc lagu caawinayo dadka danta yar ee ku nool caasimadda.
Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiiq Warfaa oo duqa Muqdisho ku soo dhaweeyayxafiiskiisa ayaa sheegay in Mashruucan la soo marsiiyay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, uu maanta ku wareejiyay maamulka gobalka Banaadir si loogu taakuleeyo dadka aadka u nugul ee ku nool gobalka Banaadir.
Wasaaradda Shaqada ayaa horay u daahfurtay mashruuc loogu magacdaray Baxnaano,kaas oo la sheegay in lacago caawin ah lagu siinayo dadka danta yar,hayeeshee weli aan la Soo bandhigin dad la siiyay lacagtaas.
Hase ahaate Mashrucaan ayaa ah mid ay Iska Kaashanayaan Hey’ado Caalami ah iyo Bankiga aduunka .Balse Aqoonyahano Farà badan ayaa walaac ka muujiyay ayagoo Sheegay in dhaqalahan uu yahay mid aan bulshada somaliyeed Dhibka Heeysta aan wax ka tareen.
Sidoo kale Waxa ay beeniyeen Hadalkii Ka Soo baxay Dowlada Federalka Somaliya kaasi Oo ahaa in sanduuqaan Kaalmada ah ay furtay Dowlada .
.Aqoonyahanada ayaa Sheegay in Dhaqaalahan ay bixinayaan Beesha caalamka si loo taageero Dadka aan heeysan dhaqaalo,